Waqtiyadii uu soo maray Julian Assange - BBC News Somali
Waqtiyadii uu soo maray Julian Assange
Guddi ay Qaramada Midoobay qabatay, ayaa lagu wadaa in ay jimcaha xeeriyaan dacwad loo haysto ninkii asaasay bogga Wikileaks, Julian Assange, oo magangalay safaaradda dalka Ecuador ee London oo uu ku jiro 3 sano in ka badan.
Assange waxaa loo haystaa eedo la xiriira kufsi oo Sweden uu kaga dacweysan yahay. Wuxuu sheegay inuu ku baaqi doono in la joojiyo warqadda loogu soo gooyey in la soo xiro, loona soo celiyo baasaboorkiisii, haddii go’aanka guddiga Qaramada Midoobay uu noqdo mid doodiisa taageeraya.
Julian Assange oo ka hadlaya shir jaraaid oo uu ku qabtay safaaradda Ecuador ee London August 2014
Julian Assange oo magangalayo ugu jira safaaradda Ecuador ee London 3 sano ka badan.
December 2010: Julian Assange waxaa lagu xiray London markii Sweden ay u soo jartay warqad xiritaan oo caalami ah. Eedaha loo haysto waxaa ku jirta mid kufsi iyo faraxumeyn ah. wuxuuse sheegay in eeduhu aysan wax sal ah lahayn. Wuxuu sheegay in damiin lagu sii daayey kadib markii tageerayashiisu ay bixiyeen lacag damiin ah oo gaareysa 240,000 oo dollar oo cadaan ah.
May 2012: Maxkamadda saree e Britain waxay go’aamisay in Julian Assange loo gudbiyo oo loo gacan galiyo Sweden, si uu uga jawaabo eedaha loo haysto.
June 2012: Assange wuxuu galay safaaradda Ecuador ee London kadib markii magangalyo siyaasaded waydiistay dawladda Ecuador.
Sawirkan waxaa la qaaday 19 August 2012, wuxuu muujinayaa Julian Assange oo warbaahinta iyo taageerayashiisa kala hadlaya safaaradda Ecuador ee London
August 2012: Dawladda Ecuador, ayaa magangalyo siyaasadeed siisay Mr Assange iyadoo sheegtay in ay jirto cabsi uu ka baqayo in lagu xadgudbo xuquuqdiisa bani'aadminimo haddii uu tago Sweden, in loo sii gudbiyo oo loo gacan galiyo dawladda Mareykanka, si uu uga jawaabo eedo ah basaasnimo la xiriirta WikiLeaks oo daabacay dukumenti sir ah oo dawladda Mareykanku lahayd.
March 2015: garyaqaanka dawladda Sweden oo hore ugu adkaystay inuu su’aalo ku waydiiyo gudaha Sweden, ayaa markii dambe soo jeediyey Assange inuu su’aalo ku waydiiyo London, waase ay bedeleen mawqifkoodi, sababtoo ah waqtiga garyaqaanku haystay oo inuu inta London ku yimaado uu su’aalo waydiiyo oo dhacay mar dhow.
August 2015: Garyqaanka dawladda Sweden oo joojiyey baaritaanadii la xiriiray 2 eedoodo oo mid yahay faraxumeyn iyo midka kale oo ah galmo sharci darro ah, sababtoo ah waqtigii ay ahayd in ay Assange su’aalaha waydiiyaan oo dhammaaday. Hase ahate, wali waxaa loo haystaa eedo kuwaas ka sii culus oo ah kufsi, wuxuuna beeniyey eedahas oo dhan.
October 2015: Boolislka Britain wuxuu ku dhawaaqay in ciidankii booliska ee la dhigay banaanka safaaradda Ecuador laga qaaday oo ay joogeen tan iyo 2012, oo ay ku baxday qiyaastii lacag ka badan 12 milyan oo gini.
February 2016: BBC waxay ogaatay in guddi shaqo oo Qaramada Midoobay u saartay arrinta Assange uu go’aamin doono in ay sharci darro tahay xariga ninkan ee dawladaha Britain iyo Sweden.
Mr Assange wuxuu u sheegay guddigga Qaramada Midoobay inuu yahay qaxooti siyaasadeed, laguna xadgudbay xuquuqdiisa oo laga hor istaagay, sida uu u yiri, inuu magangalyo waydiisto dalka Ecuador.
Mr Assange wuxuu sheegay in guddiga Qaramada Midoobay haddii tiisa ku raaco, uu ku baaqi doono in warqadii loogu gooyey in lagu soo xiray lagala noqdo, baasaboorkiisii loo soo celiyo, laakinse Booliska Britain, ayaa sheegay haddii uu ka soo baxo safaaradda in la xiri doono.